Nei uye Sei Kunyoresa uye Tora DUNS Nhamba | Martech Zone
Chipiri, April 13, 2010 Mugovera, December 23, 2017 Douglas Karr
Kana iwe uchida kuona kuti rako bhizinesi diki rinogona kuwana kumwe kutarisisa uye mikana yechibvumirano nehurumende nemabhizinesi makuru, iwe unofanirwa kunyoresa nhamba yeDUNS naDun & Bradstreet. Zvinoenderana nenzvimbo iyi:
Iyo DUNS Nhamba ndiyo indasitiri chiyero chekuchengeta mabhizinesi epasirese uye inokurudzirwa uye / kana inodikanwa neanopfuura makumi mashanu epasirese, maindasitiri uye masangano ekutengeserana, kusanganisira United Nations, iyo US Federal Hurumende, Hurumende yeAustralia neEuropean Commission.
Yako nhamba yeDUNS haisi yekungodiwa kune mimwe mikana, iriwo chiratidzo chebhizinesi rako zvakanyanya senge nhamba yekuchengetedzwa kwenharaunda (muUS) ndeye yako yekuzivisa chikwereti. Izvo zvinobvumidza mabhizinesi makuru, masangano ekukweretesa, uye hurumende yemubatanidzwa kuti itarise zvikwereti kupokana nebhizinesi rako kuti uone kana vachida kuita bhizinesi newe. Zvingave zvinonyadzisa kuita kushambadzira kwese kunodiwa kusimudzira bhizinesi rako - chete kurasikirwa chibvumirano nekuti bhizinesi rako harina kunyoreswa uye rinowanikwa mune DNB dhatabhesi!
Dun naBradstreet vanochengeta dhatabhesi yemabhizimusi anodarika zana nemakumi mana epasirese pasirese uye anopfuura mazana maviri emamiriyoni marekodhi emari akanyorwa gore rega. Izvo zvakakosha kuti uchengetedze yako bhizinesi 'chikwereti chiyero uye mukurumbira kuburikidza neDun neBradstreet sezvazviri kuteedzera yako wega chikwereti chiyero.
Iwe unogona kuwana yekuwedzera bhizinesi zviwanikwa (US) uye ruzivo rwekutangisa rako bhizinesi ku United States Hurumende Bhizinesi Diki nzvimbo.
Tags: pombidnbDun uye bradstreetpombinhamba yemadhoni